တရုတ် Pop-Up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ Pop Up Bath စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ Pop Up Bath Plug ပေးသွင်းသူ
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:Pop-Up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း,ရေချိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထပါ,ရေချိုးပါ,ဝှမ်းအမှိုက် Pop Up,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Faucets ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ > Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Pop-Up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း, ရေချိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထပါ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရေချိုးပါ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ရေချိုးခန်းသံမဏိစွန့်ပစ် Pop Up
Overflow နှင့်အတူနှင်းဆီရွှေအင်တုံ Faucet နစ်မြုပ် Drainer
ဝှမ်း Faucet ပိုက် Fittings Pop-up ရေနုတ်မြောင်း
ကြေးဝါအင်တုံ Pop-up, စွန့်ပစ် Chrome ကို Plated
ဝှမ်း faucet ပရိဘောဂ Push Pop-up ရေနုတ်မြောင်း
ဝှမ်း Faucet Push Button ကိုပတ်ပတ်လည် Pop up ရေနုတ်မြောင်း
ယွန်းချပ်နှင့်အတူအနက်ရောင် Faucet ဝှမ်း Pop-up စွန့်ပစ်
ကြေးဝါကို Chrome အင်တုံ Faucet Pup-up-Waste
360 ဒီဂရီလှည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီးဆင်းမှုနှင့်အတူ Pop Up , ရေချိုးစွန့်ပစ် pop up သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သံချေးမပါ။ Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် ring cover အားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားပြီးနောက်လှည့်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးကိုသေချာစေပြီး Pop Up Bath Plug သည်ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ အစွန်းခံသံမဏိ Pop Up အင်တုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို...
ဖိချ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စီးဆင်းမှုနှင့်အတူ ထပါ ၊ သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်အတူ။ pop-up စွန့်ပစ်ပိုမိုမြင့်မားတုံအမြင့်နှင့်မြန်နှုန်း drainage.Different မော်ဒယ်များနှင့်ပေါ့ပ် Up ကိုဗာ Plug ၏ပုံစံမျိုးစုံရရှိနိုင်ပါသည်။ အစွန်းခံသံမဏိ fittings ဆက်စပ်ပစ္စည်း, လှည့်ကွက်ယိုစီးမှုလျော့ဆက်စပ်ပစ္စည်း,...
နှင်းဆီရွှေ Pop Up ရေချိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း အိမ်သာရေကြွေအိုးများအတွက်သင့်လျော်ပါသည် ။ ခုန်အမျိုးအစားရေနုတ်မြောင်းဒီဇိုင်းကိုဖိ။ အမြင့်သည်မြင့်မားသည်။ Pop Up ရေချိုး Plug ။ Pop Up အင်တုံစွန့်ပစ် , နှင်းဆီရွှေပန်းကန် ၄၈ နာရီကြာဆားရေမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်မှုအပြီးမျက်နှာပြင်ရေယိုစီးမှုနည်းပညာ။ Pop-up waste ၏ဖော်ပြချက် နာမည်:...
Pop Up Bath စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၊ ရေချိုးခန်းဝှမ်းသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခရိုမီယမ်နှင့် ၈-၁၂ μmအတွင်းသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အရာငါးခုဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ခြင်း။ , Corresstion ခုခံဖို့ငါတို့ထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်။ Pop Up Bath Plug သည်ကြေးနီသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း ဖြစ်၍ ၎င်းတွင်ခဲသတ္တုမရှိပါ ။ ; Pop...
အိမ်သာရေကြွေအိုးများအတွက်သင့်တော်သော Pop Up Bath စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၊ ဗားရှင်းအမျိုးအစားရေနုတ်မြောင်းပုံစံ၊ ရေနုတ်မြောင်း Pop Up Bath Plug ; မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးနီသတ္တုများပုံသွန်းလောင်းခြင်းကိုချမှတ်ပါ။ ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်များ ပြီးနောက်ရေမျက်နှာပြင်ရေစီးဆင်းမှုအပေါ်တွင်အလွှာ ၅...
Pop Up Bath စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် clic-clac အင်တုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ယိုစီးမှုယန္တရား၏ထိပ်ကိုဖိ။ ဆွဲပါ။ ပေါ့ပ် Up ကိုဗာ Plug ပုစုပ်မှာရေသငျသညျအပြည့်အဝနေိုနှင့် overflow.The pop Up ကိုဝှမ်းစွန့်ပစ်လည်းမရှိ chrome finish.The သောကြေးဝါရေချိုးခန်းကရိယာအတွက်အားဖြင့်ရရှိနိုင်သာမန်ရေချိုးခန်းစုပ်စွန့်ပစ်အဘို့ဖြစ်၏။ Pop-up...
ရေချိုးခန်းကြွေထည် Pop Up Bath Waste ။ ပတ်ပတ်လည်အဖုံးကို ချ၍ ရေထွက်သွားပါစေ။ Pop Up Bath Plug ၏ခလုတ်ဒီဇိုင်းနှင့်ရှည်လျားသောပိုက်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စေပါသည်။ Pop Up Basin စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သည်ကြေးဝါနှင့်အဖြူရောင်ယွန်းထည်များဖြစ်သည်။ ကြေးဝါ ရေချိုးခန်း သုံးပစ္စည်းများသည်သင့်အိမ်အလှအပကို အသုံးပြု၍...
Black Pop Pop Up ရေချိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကြွေအင်တုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ အဖုံးကိုသာထောက်ပံ့ပြီး Lacquer ပွတ်သောကြေးဝါအတွင်းရှိရေကိုထုတ်လွှတ်သည်။ Pop Up Bath Plug သည်အလိုအလျောက် deodorization စနစ်ဖြင့်မကြာခဏစီး ဝင်၍ သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ စက်ရုံတွင် Pop Up Basin စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကိုကြေးဝါ ၅၅...
ဖိချ အမှိုက်ပုံး Pop Up ရေချိုးခန်းဖန်ခွက်ရေနုတ်မြောင်းအတွက် ရေချိုးစွန့်ပစ်ထပါ ကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်းများနှင့်ချောပွတ်နှင့်အတူ။ Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သည်မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်မြန်ဆန်သောရေနုတ်မြောင်းဖြစ်သည်။ Pop Up Bath Plug ၏မတူကွဲပြားသောပုံစံများနှင့်ပုံစံများကို ရရှိနိုင်သည်။ ကြေးဝါ ရေငုပ်ခြင်း ၊...
တရုတ်နိုင်ငံ Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပေးသွင်း
Chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါ Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ။ အတွင်းပိုင်း Spring plug သည်စာနယ်ဇင်းတိုင်းနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်, install လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကျိုးပဲ့စံပြ Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်သည်။ ရေချိုးကန်တွင်အမှိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေချိုးကန်အတွက်ရေချိုးသည့်အညစ်အကြေးများရှိသည်။
ဝှမ်းအမှိုက် Pop Up
Black က Pop-up စွန့်ပစ်ပစ္စည်း